Telegram | သတင်းမှမည်သို့ရှာရမည်နည်း မိုဘိုင်းဖိုရမ်
Cristian Garcia | | ကွေးနနျးစာ
ယခုအချိန်၌ Telegram သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်တည်ရှိနေသောအကောင်းဆုံး instant messaging application များထဲမှတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသိသည်။ သင်မည်သည့်နိုင်ငံပေါ် မူတည်၍ ၎င်းသည်အသုံးအများဆုံးဖြစ်သည်ဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေ။ စပိန်တွင် ၎င်းသည်၎င်း၏နည်းပညာများစွာတို့ကြောင့်နောက်လိုက်များပိုများလာသော်လည်း၎င်း၏လုံခြုံရေးထက်အရေးကြီးသည်.
ဤကဲ့သို့သောအပလီကေးရှင်းသည်လူတို့အကြားဆက်သွယ်ရေးလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်အကန့်အသတ်ရှိသော WhatsApp နှင့်အလွန်ကွာခြားသည်။ Telegram တွင်သင်ပိုမို သွား၍ အသေးစိတ်ရှင်းပြနိုင်သောအုပ်စုများမှကွဲပြားသောချန်နယ်များမှကျေးဇူးများစွာကိုရှာဖွေနိုင်သည်။ သင်စိတ်ဝင်စားလျှင် Telegram မှသတင်းကိုရှာပါ၊ သင်ချန်နယ်များမှကျေးဇူးကိုသင်သင်ယူလိမ့်မည်။
ဟုတ်တယ်၊ မင်းက WhatsApp ကနေလာတယ်ဆိုရင်မင်းသူငယ်ချင်းတွေ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ၊ မိသားစုတွေကိုအုပ်စုဖွဲ့ပြီးသူတို့အဲဒီမှာစကားပြောတတ်ဖို့သုံးလိမ့်မယ်။ တစ် ဦး စီသည်သတင်းအချက်အလက်များ၊ သူတို့၏ gif များ၊ ဗွီဒီယိုများ၊ ရုပ်ပုံများနှင့်သူတို့၏ link များကိုဖြတ်သန်းသည်။ ဒါပေမယ့်အဲဒါက Telegram မှာမင်းချန်နယ်တွေအတွင်းမှာရှိနေတာဘဲ သူတို့ကမင်းကိုနေ့စဉ်သတင်းအချက်အလက်ပေးတယ်သတင်းကဲ့သို့ဖြစ်သော်လည်းသင်၏မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းတွင်ရှိသည်။
အမှန်မှာ Telegram တွင်သတင်းချန်နယ်များသာရှိသည်၊ ၎င်းသည်အကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးရှိသည်။ နည်းပညာ၊ ဗီဒီယိုဂိမ်းများ၊ anime၊ တေးဂီတ၊ စာဖတ်ခြင်းနှင့်အကြောင်းအရာစာရင်းရှည်များ အဲဒါကအဆုံးမရှိဖြစ်လိမ့်မယ်၊ ငါတို့ဒီမှာထည့်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့်မင်း ၀ င်ပါ ၀ င်နေတယ်ဆိုရင်ငါတို့ကမင်းကိုတစ်ယောက်ဒါမှမဟုတ်တစ်ယောက်ထားခဲ့နိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကနောက်မှဖြစ်လိမ့်မယ်။ အခုငါတို့ကအုပ်စုတွေနဲ့လိုင်းတွေရဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုတွေကိုသိပြီးတော့ Telegram အက်ပလီကေးရှင်းမှာမင်း ၀ င်လို့ရတဲ့သတင်းချန်နယ်တွေပေးမယ်။
1 Telegram ရှိချန်နယ်များနှင့်အုပ်စုများအကြားခြားနားချက်များ
2 Telegram ရှိသတင်းချန်နယ်များ
2.3 ဂီတအကြောင်း Telegram ချန်နယ်များ
2.4 Telegram ချန်နယ်များသည်ရုပ်ရှင်ပွဲ ဦး ထွက်များနှင့်စီးရီးများအကြောင်းသတင်းများဖြစ်သည်
2.5 နိုင်ငံတကာနှင့်အမျိုးသားအားကစားသတင်းများတွင် Telegram ချန်နယ်များ
2.6 Telegram ချန်နယ်များသည်ဗီဒီယိုဂိမ်းသတင်းများနှင့်အမျိုးမျိုးသောအက်ပလီကေးရှင်းများအကြောင်း
2.7 Telegram ချန်နယ်များသည်စပိန်အစိုးရနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှတရားဝင်သတင်းများနှင့်ပတ်သက်သည်
မည်သည့်အကြောင်းအရာကိုမဆိုအကြောင်းကြားနိုင်သောချန်နယ်များ ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်၊ ၎င်းကိုသင်သိရန်အရေးကြီးသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အင်တာနက်စာမျက်နှာများအားလုံး၌သတင်းသို့မဟုတ်သင်ရှာဖွေနေသောအရာကိုသင်တွေ့နိုင်သည်။ Telegram အုပ်စုနှင့်ချန်နယ်နှစ်ခုလုံး (ပိုပိုများလာသည်) သူတို့မှာ active users ရာချီရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သင်သိသင့်တဲ့နှစ်ခုကြားမှာကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်တစ်ခုရှိတယ်။
ကြေးနန်းအဖွဲ့များသည်အခြေခံအားဖြင့်သင်ဘာမဆိုဝေမျှနိုင်သောလူများဖြင့်ဖန်တီးထားသောစကားပြောခန်းများဖြစ်သည်။ လူတိုင်းစကားပြောနိုင်တယ်။ အများပိုင်အုပ်စုများသို့မဟုတ်သီးသန့်အဖွဲ့များရှိလိမ့်မည်၊ သို့သော်နောက်ဆုံးတွင်၎င်းသည်လူတိုင်းအတွက်အရာဖြစ်သည် ဆက်သွယ်မှုသည်ပါတီနှစ်ခုစလုံး၊ ဖန်တီးသူများနှင့်ကျန်နေသူများဖြစ်သည်မရ။ စည်းမျဉ်းများ၊ အုပ်ချုပ်သူများနှင့်ဤကဲ့သို့သောအရာများရှိလိမ့်မည်မှာသိသာထင်ရှားသည်၊ သို့သော်သင်အိမ်ထဲသို့ရောက်သည်နှင့်ဖိတ်ကြားခြင်းမရှိဘဲအဆုံး၌သူတို့သည်သင့်ကိုမနှင်ထုတ်လျှင်စကားပြောနိုင်လိမ့်မည်။
ဆန့်ကျင်ဘက်တွင်ချန်နယ်များ ဆက်သွယ်ရေးသည်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှလူထုသို့သွားသော်လည်းလူထုမှအုပ်ချုပ်ရေးမှူးသို့မရောက်ဖူးပါ။ Telegram channel တစ်ခုတွင် member တစ်ယောက်သာ message များပို့လိမ့်မည်။ ဒါကအုပ်စုတစ်စုနဲ့ရုပ်သံလိုင်းတစ်ခုရဲ့အကြီးမားဆုံးကွာခြားချက်ဖြစ်ပြီးမင်းအရင်တုန်းကငါတို့ပြောခဲ့တဲ့ Telegram၊ ဗွီဒီယိုဂိမ်းတွေ၊ သတင်းတွေ၊ ကမ်းလှမ်းချက်တွေနဲ့အခြားအကြောင်းအရာတွေကိုမင်းရှာတွေ့နိုင်တဲ့နေရာပဲ။
များစွာသောအဖွဲ့များကဲ့သို့၊ ဤချန်နယ်များသည်အများမြင်နိုင်ပြီးသင်အလိုရှိသည့်အခါတိုင်းပူးပေါင်းနိုင်သည်။ မင်းမှာချန်နယ်ကိုတိုက်ရိုက် URL ရှိနေသရွေ့မင်းဝင်နိုင်လိမ့်မယ်။ အက်ပလီကေးရှင်းကမင်းကိုချတ်တစ်ခုနဲ့လင့်ခ်ချိတ်ဖို့ခွင့်ပြုတဲ့အတွက်ဒီနေ့ခေတ်မှာများစွာသောချန်နယ်တွေကအုပ်စုတွေအဖြစ်အလုပ်လုပ်နေပြီ။ ထို့ကြောင့်၊ ချန်နယ်တွင်သတင်းအသစ်တစ်ခုလွှင့်သည့်အခါတိုင်း၊ သင်တုန့်ပြန်သည့်အနေနှင့်ထိုမက်ဆေ့ခ်ျကိုစကားစမြည်စတင်နိုင်လိမ့်မည်။ တစိတ်တပိုင်းအားဖြင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုအချို့ရှိသော်လည်းအုပ်ချုပ်သူ၏သတင်းစကားသည်အမြဲလွှမ်းမိုးနေပြီးဆက်လက်ရှိနေလိမ့်မည်ဆိုကြပါစို့။
အခုမင်းဒါကိုသိတာနဲ့ငါတို့ကမင်းကိုသတင်းချန်နယ်တွေ၊ သတင်းလိုင်းတွေကနေစပြီးစုစည်းဖို့ဆက်လုပ်သွားနိုင်တယ်။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆို၊ ငါတို့သည်သင်၏အကျိုးစီးပွားအကြောင်းကိုမသိသောကြောင့်ငါတို့သည်သင်တို့အတွက်အကြောင်းအရာများကို ပို၍ စာရင်းချလိမ့်မည် မင်းကနည်းပညာ၊ ဗွီဒီယိုဂိမ်းတွေအကြောင်းသတင်းတွေကိုစိတ်ဝင်စားနိုင်တယ် သို့မဟုတ်ကမ်းလှမ်းချက်၏အကျိုးကျေးဇူးကိုရယူခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍
သူတို့ကိုဝင်ဖို့အတွက်မင်းသူတို့ရဲ့ဝက်ဘ်စာမျက်နှာတွေမှာတိုက်ရိုက် link ကိုရှာရမယ်၊ Telegram ကိုသွား၊ အုပ်စုတွေနဲ့ချန်နယ်တွေကိုရှာရင်သူတို့နာမည်ရိုက်ထည့်ပါ။ ၎င်းတို့သည်၎င်းတို့အားနေ့စဉ်မွမ်းမံထားသောထောင်နှင့်ချီသောနေ့စဉ်နောက်လိုက်များပါ ၀ င်သောချန်နယ်များဖြစ်သောကြောင့်၎င်းတို့ကိုရှာရန်သင်မကုန်ကျသင့်ပါ။
ဂီတအကြောင်း Telegram ချန်နယ်များ
Anuel AA တေးဂီတ
Telegram ချန်နယ်များသည်ရုပ်ရှင်ပွဲ ဦး ထွက်များနှင့်စီးရီးများအကြောင်းသတင်းများဖြစ်သည်
Hollywood ရုပ်ရှင်များ HD
နိုင်ငံတကာနှင့်အမျိုးသားအားကစားသတင်းများတွင် Telegram ချန်နယ်များ
Charlie Picks အခမဲ့
ကွန်မြူနတီ APK FULL PRO Reborn
El Prat မြို့တော်ခန်းမ
Sant Celoni မြို့တော်ခန်းမ
Ajuntament de les အသုံးပြုသူများ
Puente Genil မြို့တော်ခန်းမ
Villanueva de la Serena မြို့တော်ခန်းမ
Huétor Vega မြို့တော်ခန်းမ
Palomares del Ríoမြို့ကောင်စီ
၎င်းသည် Telegram တွင်သင်ရှာနိုင်သောချန်နယ်အရေအတွက်၏နမူနာသေးသေးလေးဖြစ်သည်။ ငါတို့ဆက်လုပ်လို့ရပေမယ့်မင်းဘယ် channel အမျိုးအစားအကြောင်းမေးချင်တာဖြစ်ဖြစ်ငါတို့ကိုမေးဖို့ဒါမှမဟုတ်မင်းကိုမေးဖို့ဘဲထားမယ်။ ဘယ်ကိစ္စမဆို ငါတို့မှာအကြောင်းအရာများစွာရဲ့ချန်နယ်တွေကိုထည့်ပြီးပြီ.
ဒီဆောင်းပါးကအထောက်အကူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် ချန်နယ်တစ်ခုနှင့်တယ်လီဂရမ်အဖွဲ့အကြားခြားနားချက်ကိုသိပါ။ ဒါပေမယ့်အရာအားလုံးထက်မင်းအကြောင်းအရာကိုဖြစ်ဖြစ်၊ မင်းစိတ် ၀ င်စားတဲ့သတင်းချန်နယ်ကိုတွေ့ပြီလို့ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ မည်သည့်သံသယ (သို့) အကြံပြုချက်ကိုမဆိုသင်အောက်ပါ comment box တွင်ထားခဲ့နိုင်သည်။ နောက် Mobile Forum ဆောင်းပါးမှာတွေ့မယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - မိုဘိုင်းဖိုရမ် » social networking » ကွေးနနျးစာ » Telegram ကနေမင်းကိုသတင်းဘယ်လိုအကြောင်းကြားမလဲ